हाइवे अर्थात खाडलैखाडलः सामाधान कहिले? – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsहाइवे अर्थात खाडलैखाडलः सामाधान कहिले?
October 16, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, कालेबुङ, मुख्य समाचार 0
कालेबुङ : हाइवेको जीर्ण अवस्थाको कारण धेरै महिनादेखि क्षेत्रवासीले धेरै समस्या भोग्नु परिरहेको छ। पिडब्ल्युडी विभाग भन्दा पहिलेको ग्रेफ कम्पनी नै ठिक रहेको हाइवेवासीको भनाई रहेको छ। राष्ट्रिय राजमार्ग 10-लाई ग्रेफ कम्पनीको हातबाट पिडब्ल्युडी एनएच विभागलाई हस्तान्तरण गरेपछि क्षेत्रवासीले विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको हो।
वर्तमान यहाँको बागपुलदेखि टिस्टासम्मको बाटोमा धेरै ठाउँ ठुल्ठुला खाडल भएको कारण चालकहरूले वाहन चलाउदा धेरै असुविधहरू भोग्नु परिरहेको हो।
चालकहरूको गुनासो: पिडब्ल्युडी नै राम्रो
टिस्टा भ्याली निवासी चालक महिन्द्र प्रधान बताउँछन-
-‘हाइवेमा वाहन चलाएको पच्चीस वर्ष भयो तर जब हाइवेबाट ग्रेफ कम्पनीलाई हटाएर पिडब्ल्युडी राखियो त्यसदिनदेखि नै हामीले धेरै समस्या भोग्नु परि रहेको छ। बाटोमा धेरै ठुल्ठुला खाडल भएकोकारण उल्टा दिशा वाहन कुदाउनु पर्छ। जसको कारण दुर्घटना हुने प्रबल सम्भावना छ अनि धेरै वाहनहरूको यही कारण दुर्घटना भइरहेकै पनि छ। जुनदिनदेखि पिडब्ल्युडी आयो त्यसदिनदेखि उक्त बाटोको पेलाइ पनि भएको छैन।
ग्रेफ कम्पनी हुँदा धेरै कर्मचारीहरू थिए। खोपल्टिएको ठाउँहरूमा दिनहुँ नै माटो भरेरै पनि बाटो सम्य बनाइरहेको हुनथ्यो। तर अहिले 10 जना कर्मचारी पनि भेट्न मुस्किल छ। बाटो समान हुँदा सिलगडी पुग्न डेढ घन्टा लाग्छ। तर अहिले तीन घन्टा लाग्न छ। वाहनमा तेल पनि बेसी लाग्छ।’
क्षेत्रवासीको गुनासो: सम्बन्धित विभागको लापरवाही
रम्बी लाइन होटलका बिनोद प्रधान भन्छन्-
‘राष्ट्रिय राजमार्ग भन्छ तर गोरू गाडी हिँड्नेजस्तो छ राजमार्ग। राजमार्गको यस्तो अवस्था सम्बन्धित विभागको लापरवाहीको कारण भएको हो। बाटोको किनारमा दोकान खोलेर परिवार चलाइरहेको वर्षौं भयो तर हाल हाइवेको जीर्ण अवस्थाको कारण दोकान बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आइपरेको छ। एकातिर विभागले नाली खनेर आधा कल्चो छोडी राखेको छ। यसको कारण बाटो साघुँरो भएको छ। जसले गर्दा दिनहुँ जाम भइरहन्छ। बाटो साँघुरो भएको कारण वाहनहरू मूल बाटो छाड़ेर किनारतिर गुड़िरहेको छ। जसले गर्दा दुर्घटना हुने प्रबल आशङ्का हुन्छ।’
पसले गञ्जु प्रधान भन्छन्-
‘बाटोबाट उड़ेको धुलो घर -दोकान भित्र पस्ने गर्छ। जसले गर्दा सम्पूर्ण धुलो खानेकुरामा पसेको कारण ग्राहकहरू उक्त खाना खान घिनाउँछन्। बाटो खोबिल्टिएको ठाउँमा पेलाइ नगरेर माटोले भर्ने गर्छ। उक्त माटो सुकेर धुलो उड़ेको कारण हाल दोकान चलाउन पनि गाह्रो परिरहेको छ।’
सम्बन्धि विभाग पीडब्ल्यूडी सह अभियन्ता उत्तम प्रधान भन्छन्-
‘बाटो पेलाइ आदि मरम्मति कार्यहरूको धेरै महिना अघि टेन्डर भइसकेको हो। जुन टेन्डर ठेकादार रिभालाई प्राप्त भएको छ। यता पहाड़ अनिश्‍चितकालीन बन्दको कारण काम शुरू गर्न गाह्रो परिरहेको थियो। तर बन्दपछि हप्तादिन भित्रै कार्य पुनः शुरू गर्ने ठेकेदारको भनाइ थियो। हालसम्म विभागको पक्षबाट काम शुरू गर्नको निम्ति धेरै पत्रचारहरू उनलाई गरेको सह अभियन्त राईले बताएका छन्। ठेकेदार पक्षबाट कार्य शुरू गर्नको निम्ति मसिनहरू एकत्रित गर्दै तयारीमा रहेको छ।’
कहाँ कहाँ समस्या?
हाल हाइवेको भसुवा, रवी झोड़ा, सिताराम झोड़ा, सेती झोड़ा, लोहा पूल, रम्बी, 27 माइल , 29 माइल, गेल खोला, लिखुभिर आदिको बाटो जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। विभागले सबै बाटोहरू चाँड़ै समान गरी यतायात सुविधा जनक बनाउनु अनिवार्य बनेको छ। अर्कोतिर बन्द अगावै हाइवेको २७ माइल, कालिझोडा, रवि झोडा आदि क्षेत्रहरूमा कल्वर्ट निर्माण कार्य थालिएको थियो। जो काम हाल आधा कल्चो छोडिएको छ। यसरी नै नालीको कामहरू पनि आधा कल्चो छोडिएको देखापरेको छ। यता सम्पूर्ण काम विभागले टेन्डर मार्फत ठेकेदारद्वारा गराइन्छ भने विभागको लापरबाहीको कारण नै वर्तमान बाटोको जीर्ण अवस्था रहेको मानिसहरू बताउँछन्।
सरकारले गर्दैछ गणतान्त्रिक अधिकारको हनन्